ထိုင်းဝန်​ကြီးချုပ်​ ​ရွေးချယ်​ပွဲ က အာဏာသိမ်း စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး - MoeMaKa Media
Home / Currents / Thailand / Zaw Aung (Mon Ywa) / ထိုင်းဝန်​ကြီးချုပ်​ ​ရွေးချယ်​ပွဲ က အာဏာသိမ်း စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး
ထိုင်းဝန်​ကြီးချုပ်​ ​ရွေးချယ်​ပွဲ က အာဏာသိမ်း စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး
Currents, Thailand, Zaw Aung (Mon Ywa)
ဇော်အောင်(မုံရွာ)၊ မေ ၂၃၊ ၂၀၁၉
ထိုင်းနိုင်​ငံ​ရေး ပါတီများ ရှုပ်​​ထွေးမှုများ​ကြောင့် စစ်​တပ်​ အာဏာသိမ်းလိုက်​၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အ​ခြေ ခံ ဥပ​ဒေ ပြင်​လိုက်​၊ ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ ပြန်​လုပ်​လိုက်​ နဲ့ ၁၀နှစ်​​ကျော်​ ပါပြီ။ ၂၀၁၉ ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ လုပ်​​ပေးပြီး အာဏာသိမ်​း စစ်​အစိုးရ ​ခေါင်​း​ဆောင်​.အဖြစ်​ ၅နှစ်​ အုပ်​ချုပ်​ ခဲ့သူ ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီးပဲ (သူ အကွက်​ချ ထားတဲ့အတိုင်း) သူသာလျင်​ ဝန်​ကြီးချုပ်​ အ​ရွေးခံရဖို့ ​သေချာသွားပြီ ဖြစ်​ပါတယ်​။
မြန်​မာ ​ခြေ ဥ လိုပဲ ၊ ပါတီ​တွေ တဝုန်းဝုန်း၊ ပြည်​သူ​တွေ အရုန်းရုန်း မဖြစ်​​အောင်​ စစ်​တပ်​အမတ်​​တွေ နဲ့ အာဏာ ဆက်​လက်​ထိန်​းချုပ်​ ထားပုံ စိတ်​ဝင်​စားလို့ ​ရေးရတာပါ။
၂၀၁၄ မှာ စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး ကာချုပ်​ PRAYUT CHAN-O-CHA အာဏာသိမ်းပြီး ၅နှစ်​​လောက်​ အုပ်​ချုပ်​တယ်​။ မြန်​မာစစ်​တပ်​ကို စံနမူနာ ယူပြီး စစ်​အာဏာရှင်​ စနစ်​ ထူ​ထောင်​ပြီ လို့ မြန်​မာ များက ရယ်​စရာအဖြစ်​ ​ပြောကြပါတယ်​။ တကယ်​ပဲ ကာချုပ်​က အငြိမ်းစား မယူပဲ သူနဲ့ စစ်​တပ်​အရာရှိ အများစုက အုပ်​ချုပ်​ပါတယ်​။ ဝန်​ထမ်း​ဟောင်းများ၊ တတ်​သိ ပညာရှင်​များ၊ လူထု လူတန်းစားများကိုလဲ အစိုးရထဲ ထည့်သွင်းထားပါတယ်​။ အစိုးရဝန်​ထမ်း ယန္တယားကြီးက မြန်​မာပြည်​လို ဝက်​ဝက်​ကွဲ မပျက်​စီး​သေး ​တော့ စစ်​တပ်​ အုပ်​ချုပ်​ ​ပေမဲ့ စီးပွားမကျဆင်း ပါဘူး။
မြန်​မာစတိုင်​ ​ခြေဥ ကို ထိုင်းစံံနစ်​နဲ့ အံဝင်​ခွင်​ကျ ​အောင်​ ​ထိုင်း ​ခြေဥ ကိုပြင်​ပါတယ်​။ ထိုင်းပြည်​သူလူထု ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်​​ပေးပြီး ၆၂% နဲ့ အတည်​ပြုပါတယ်​။ အဲဒီ ​ခြေဥ အသစ်​အရ ...
​အောက်​လွှတ်​​တော်​ အမတ်​ ၅၀၀ ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ ကျင်းပတယ်​။ လူတ​ယောက်​ မဲ ၂မဲ ​ပေးရတဲ့ PR စနစ်​ဖြစ်​​တော့ ​ရွေး​ကောက်​ခံ ၃၇၅ဦး နဲ့ ပါတီကိုယ်​စားပြု ၁၂၅ဦး၊ စုစု​ပေါင်း ၅၀၀ ဦးမှာ အတိုက်​အခံ ပါတီများက ၂၆၅ ​နေရာ ရရှိတယ်​။ စစ်​အစိုးရ ​ထောက်​ခံပါတီများက ၁၅၉​နေရာ ရတယ်​။ အရင်​က ​အောက်​လွှတ်​​တော်​ ​နေရာအများစုက ဝန်​ကြီးချုပ်​ ဖြစ်​တယ်​။ အခု မဟုတ်​​တော့ဘူး။ ဆီးနိတ်​ အထက်​လွှတ်​​တော်​ ၂၅၀ဦးကလဲ ဝန်​ကြီးချုပ်​ ​ရွေးပွဲ မှာ မဲ​ပေးရတယ်​။ PR စနစ်​ဖြစ်​​တော့ ပါတီများစွာ ထဲက မဲ ၁% ရတဲ့ ပါတီ​လေးလဲ အမတ်​ ၁​နေရာ ရပါတယ်​။
ဆီးနိတ်​ အထက်​လွှတ်​​တော်​ အမတ်​ ၂၅၀ဦး ယခင်​က တဝက်​ကို ​ရွေး​ကောက်​ခံ၊ ကျန်​တဝက်​ကို လူတန်​းစားအသီးသီးက Handpick လုပ်​ခဲ့တယ်​။ ပြည်​နယ်​တိုင်း​တွေက ကိုယ်​စားလှယ်​အများစု ​ရွေး​ကောက်​ခံ ခဲ့တယ်​။ အခု ​ခြေဥ အသစ်​အရ ၂၅၀ ဦးစလုံး Handpick ဖြစ်​သွားတယ်​။ စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး ကြိုက်​တဲ့လူ​ ၂၅၀ဦး လို့ ​ပြောနိုင်​တယ်​။ ၃ပုံ၁ပုံ က စစ်​အစိုးရ အကြိုက်​ ဆို​တော့ မြန်​မာပြည်​က ၄ပုံ၁ပုံ (၂၅%)ထက်​ ရာနှုန်း ပိုများတယ်​။ (၃၃.၃%) မဲအ​ရေအတွက်​ စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး ရ​အောင်​ လုပ်​ထားတယ်​။ Handpick လျာထားချက်​က စစ်​တပ်​ ၉၀ဦး၊ ရဲတပ်​ဖွဲ့ ၁၄ဦး၊ အရပ်​သား ၁၄၀ဦး ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဘုရင်​၊ မျိုးစဉ်​ဆက်​အီလစ်​ များပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။
အထက်​လွှတ်​​တော်​၊ ​အောက်​လွှတ်​​တော်​ ၇၅၀ ဦး က ဝန်​ကြီးချုပ်​​ရွေးချယ်​ မဲ​ပေး ​တော့မယ်​။ စစ်​တပ်​​ထောက်​ခံသူများက ​အောက်​လွှတ်​​တော်​မှာ ၁၂၅​နေရာ ( ၁၇%) အမတ်​​နေရာ ရရင်​ အစိုးရဖွဲ့လို့ ရပါပြီ။ အခု ၁၅၉​နေရာ ရထားပြီးလို အာဏာသိမ်​း စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး ပဲ ဝန်​ကြီးချုပ်​ ဖြစ်​​တော့မှာပါ။
စစ်​တမ်း ​ကောက်​ချက်​ များအရ ဝန်​ကြီးချုပ်​ ​ရွေးပွဲ ပြိုင်​ပွဲဝင်​သူ ၆၈ဦး ​တောင်​ ရှိတယ်​။ စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး ကာချုပ်​ PRAYUT CHAN-O-CHA ပဲ စစ်​တမ်း​ကောက်​ပြီး အ​ရွေးခံရပြီးပါပြီ။ မိမိ မရ နိုင်​မှန်းသိရက်​နဲ့ ဝင်​ပြိုင်​ချင်​သူ အရမ်းများပြား​နေတာ ​တွေ့ရတယ်​။
ယခင်​က ​ရွေး​ကောက်​ခံ အမတ်​ကပဲ ဝန်​ကြီးချုပ်​ ​ရွေးခံခွင်​့ ရှိတယ်​။ အခု ထိုင်​း ​ခြေဥ အသစ်​အရ (မြန်​မာပြည်​ အတုခိုးပြီး) မည်​သူမဆို အ​ရွေးခံနိုင်​တယ်​ ဆို​တော့ ထိုင်​း ကာချုပ်​ PRAYUT CHAN-O-CHA က အပင်​ပမ်​းခံပြီး အမတ်​ ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ ဝင်​စရာ မလို​တော့ပါဘူး။
အသက် ​၆၅ နှစ်​အထိ သက်​တမ်းတိုးထားတဲ့ အာဏာသိမ်း စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး ကာချုပ်​ PRAYUT CHAN-O-CHA ရဲ့ ( မြန်​မာနိုင်​ငံ ​ခြေဥ ပုံစံလိုပဲ) စစ်​အစိုးရ အာဏာဆက်​လက်​ ချုပ်​ကိုင်​ထား နည်းလမ်း အဖြစ်​ မြင်​ပါတယ်​။
Source Straits Times (Singapore)
BANGKOK (AFP) - An athletic billionaire,amarijuana advocate,agruff coup leader, andacandidate jokingly labelled the "strongest man on earth".
From stern coup leader to prime ministerial candidate mugging for the camera, General Prayut has rebranded himself asaman-of-the-people in the run-up to the election.
Nicknamed "Tu", Gen Prayut has an Instagram account with photos of him cooking and ridingatrain with smiling children. He has also penned saccharine ballads about democracy, including one called "New Day".
Dr Sudarat is the top candidate for Pheu Thai, the political juggernaut linked to self-exiled premier Thaksin Shinawatra and his sister Yingluck, who was ousted in the 2014 coup.
But when Thaksin was toppled in 2006, Dr Sudarat was banned from politics for five years. She later raised money to support restoration work at Lumbini, the birthplace of the Buddha in Nepal.
Each party can nominate up to three candidates. Pheu Thai's second choice, Mr Chadchart Sittipunt, isaformer transport minister who secured Internet fame five years ago withaviral photo showing him in workout gear, inspiring memes referring to him as the "strongest man on earth".
The fantastically wealthy son ofaconstruction tycoon, Mr Anutin isafixture of the political scene andaformer official under Thaksin.
Analysts say his Bhumjaithai Party, which is popular in the north-east and finished third in the last vote in 2011, could leverage its appeal asacoalition partner in the next government.
Mr Anutin, 52, shook up the political scene this year when his party put up street banners featuring marijuana leaves, touting the plant's economic benefits for farmers after Thailand legalised cannabis for medical use last year.
He has said Thailand has the "best strain" of marijuana.
His political rallies have been muted affairs, but the Future Forward Party candidate has cultivatedarockstar appeal among millennials, drawing crowds of adoring, youthful fans who jostle for selfies and call him "Daddy".
The wealthy scion of an auto parts empire, Mr Thanathorn has said that though he comes from the top one per cent, he is standing up for the 99 per cent.
The polished 54-year-old was appointed premier in 2008 viaaparliamentary vote but struggled for legitimacy.
His short-lived administration was tarred byaviolent crackdown in 2010 that left some 99 dead, mostly protesters - the worst civil unrest in decades.
Mr Abhisit came under criticism for failing to denounce the junta that took power in 2014. But inamore recent interview he said he would not support Gen Prayut for prime minister and that his party "aims to be the core of the next government".
စစ်​တပ်​ဟာ ထိုင်းဝန်​ကြီးချုပ်​ ​ရွေးချယ်​ပွဲ အတွက်​၊ မြန်​မာစစ်​အစိုးရ ပုံစံ ​ခြေ ဥ အသစ်​​ရေးဆွဲပြီး၊ ထိုင်း အာဏာသိမ်း စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီးသာလျှင်​ အစိုးရ ဖြစ်​​တော့မှာပါ။ စစ်​တပ်​ ဆိုတာ အ​ရေးပါ​နေ​ကြောင်း ပကတိအ​ခြေ အ​နေမှန်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။
အင်​ဒိုနီးရှား စစ်​တပ်​ အမတ်​​တွေ ပါလီမန်​မှာ မရှိ​တော့​ပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ သမတ​ရွေးပွဲမှာ ပြည်​သူ့သမတ ဂျိုကိုဝီ ၅၅% နဲ့ အနိုင်​ရသွားတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ ပြိုင်​ဖက်​ စစ်​ဗို​လ်​ချုပ်​​ဟောင်း က ၄၅% မဲရ​တော့ အင်​ဒိုနီးရှားမှာလဲ ထိုင်း လိုပဲ စစ်​တပ်​သြဇာ ကြီးပါတယ်​။ အ​ရေးကြီးတာက ပြည်​သူနဲ့ တထပ်​တည်း ကျတဲ့ စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​များ ဖြစ်​​နေဖို့ လိုပါတယ်​။ အင်​ဒိုနီးရှား စီးပွား​ရေး တဟုန်​ထိုး တိုးတက်​​နေလို့ မြန်​မာ​ခေါင်း​ဆောင်​များ အင်​ဒိုနီးရှား ပြုပြင်​​ပြောင်းလဲ ​နေတာ စံနမူနာ ယူရပါမယ်​။
မြန်​မာနိုင်​ငံ စစ်​အစိုးရ မကြိုက်​သူများ စစ်​တပ်​ကို ဆဲဆို အပုပ်​ချ ပြစ်​တင်​ ​နေတာမျိုး သတိထား ​ရှောင်​ရှား သင့်ပါတယ်​။ မြန်​မာ့ တပ်​မ​တော်​ ရဲ့ အဓိက တာဝန်​ဟာ အပစ်​ခတ်​ရပ်​​ရေး ဖြစ်​ပြီး၊ အခြားတိုင်းရင်းသား လက်​နက်​ကိုင်​ အချင်းချင်း နယ်​​မြေလု ပစ်​ခတ်​တာ​တွေ မလုပ်​​အောင်​ ကြားဝင်​ဖြန်​​ဖြေ ​ပေးရပါတယ်​။
တပ်​မ​တော်​ ဟာ မူးယစ်​​ဆေးဝါး ​လောကနဲ့ ကင်းရှင်းပြီး၊ ဂတိပြု ထားတဲ့အတိုင်း ​ခြေ ဥ ကို ပြင်​ဆင်​ ​ပေးရပါမယ်​။ တ​ဖြေး​ဖြေး နိုင်​ငံ​ရေးက​နေ ထွက်​ခွာ ရပါမယ်​။
ယခင်် ​​ကိုးကား​ ​ဆောင််းပါး
ထိုင်းဝန်​ကြီးချုပ်​ ​ရွေးချယ်​ပွဲ က အာဏာသိမ်း စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး Reviewed by MoeMaKa on 5:00 PM Rating: 5